Wonderful uphumule, awukwazi kuphela uzibixe imisebe eshisayo kwelanga ogwini. Izivakashi eziningi ezisetshenziswa ukuchitha iholide ezweni efudumele, ngokungabi nabulungisa akhohlwe amathuba okunikeza abahambi ne uthi enyakatho. Ngisho phezu eqhweni, ungathola okuthile ukwenza, isibonelo, izinto Iceland ngeke abashiye ubani nandaba. Leli zwe elihle kangaka livulekele izivakashi, kungenzeka ukuba bajwayelane amasiko abantu, bafunde umlando wayo, nibuke indalo.
The main isikhungo yamasiko isimo ubhekwa Reykjavik. Izikhangibavakashi lapha lingama umlingisi yezakhiwo kanye zomlando. Umuzi kuwufanele ukuvakashela igalari ye-Iceland, i-National Museum, Árni Magnússon Institute, iyisonto iqoqo elikhulu imisebenzi zomlando, isonto Hallgrímskirkja. Lezi zindawo bazi kangcono izwe, benamandla umlando zalo nasemasikweni alo. Kodwa ezikhangayo Iceland abagcini esikhumbuzo yezakhiwo kanye zomlando, futhi abahambi eziningi musa ukuheha kubo, futhi ubuhle emangalisayo bemvelo.
Kuphela travel ngaphandle emadolobheni amakhulu, ungabona ubuso wangempela waleli zwe ezineqhwa. Naphezu futhi kunomoya yokuthi izwe cishe ngokuphelele embozwe iqhwa, kukhona into ukubona. Izivakashi eziningi beze lapha okokuqala, awukwazi ukufihla imizwa enjalo ekugxiliseni kubo ukhiqiza Iceland. Umhlahlandlela kwembula zonke emakhoneni amahle kakhulu zaleli zwe. Lapho ungajabulela amaningi amawa, izimpophoma, iziphethu nezintaba-mlilo. Ensimini ka isimo kukhona iziqiwu ezintathu, ngamunye wabo endaweni ehloniphekile. Iceland ngokwabo novalo ezihlobene imvelo, ngakho zama uyigcine ifomu yayo yasekuqaleni.
E-Iceland, intaba-mlilo 25, futhi lesi siqhingi ngokwaso kuyinto omningi wezintaba-mlilo. It kubhekwa edume kakhulu intabamlilo Askja, ngo-1875 edala ngenxa ukuqhuma namachibi amabili emangalisayo: Viti futhi Öskjuvatn. Intaba ephakeme kunazo e olusenyakatho kubhekwa Curling intabamlilo, Hekla iyasebenza, ezinsukwini ubudala abendawo walibiza ngokuthi "Gateway esihogweni."
Izikhangibavakashi Iceland, okubangela ilukuluku enkulu - a Fjord. Njengoba lizungezwe izwe ogwini olunamadwala amatheku encane tortuous futhi ayibanzi adaliwe sibonga umsebenzi njalo zomhlaba. Akuwona wonke izwe ungathola isimangaliso nemvelo. I amawa ngobukhulu zitholakala ezingxenyeni zasentshonalanga nasempumalanga yezwe.
Iceland ezikhangayo bazongena esitelekeni ubuhle babo futhi ubukhulu. Qiniseka ukuthi uvakashela hhayi kuphela National Parks, amawa nezintaba-mlilo, kodwa futhi nezimpophoma. Kwakumelwe lapha kakhulu. Ehlobo, lapho iqhwa liyancibilika, imifula entabeni wawugcwalisa ngamanzi ecacile nezimpophoma kukhanye yonke inkazimulo yayo. asibekela Famous e Iceland nedlanzana ezimbalwa, kodwa kukhona abaningi abangabhalisile yethiwa igama. Qiniseka ukuvakashela Gullfoss, eyaziwa ngokuthi i- "impophoma segolide." Ukuhamba kufanele bakhethe sezulu sunny. Iceland - nakuba ezweni abandayo, kodwa ezithakazelisayo kakhulu izivakashi ngokuvakashela kanye uyofuna ukubuyela lapha kaningi.